गृह स्वचालन, तपाईंको आईफोनबाट घरको ढोका खोल्नुहोस् आईफोन समाचार
गृह स्वचालन, तपाईंको आईफोनको साथ घरको ढोका खोल्नुहोस्
कारमेन रोड्रिग्ज | | आईफोन सहायक उपकरणहरू, आईफोन समाचार
हामी सबै कार खोल्नको लागि रिमोटको प्रयोगमा बानी भएका छौं, र केहि शुरूआत गर्नको लागि प्रोक्सिमिटी कार्ड पनि हामी काम, होटेलहरू इत्यादिमा पहुँच कार्डहरू प्रयोग गर्दछौं, त्यसोभए हामी किन यसलाई निरन्तरता दिन्छौं? कुञ्जीहरूको गुच्छा घर प्रवेश गर्न?
म सँधै सोच्छु कि सामान्य रूपमा उत्पन्न गर्दछ असहाय महसुस गर्दैछु उपकरण छ कि तपाईंको सपनाको अभिभावकको रूपमा ह्याक गर्न सकिन्छ, तर तपाईंले जुन प्रणाली राख्नुभयो, प्रवेश गर्न चाहने चोरले त्यसो गर्छ यदि तपाइँ प्रत्येक पहुँचमा एक प्रहरी राख्नु भयो भने पनि।
यस प्रणालीका लागि हाल धेरै विकल्पहरू छन्, तर त्यहाँ दुई छन् कि उनीहरूको सुरक्षा र स्थापना सहजताको लागि अपवाद हो। अगस्ट र केभोले विश्वसनीयता र कार्यक्षमता बीच सन्तुलन हिड्छ, दुबै बाहिरबाट लकबाट बाहिर आउँदछ किनकि यसले अझै कुञ्जी विकल्प राख्दछ।
अगस्ट यो एक प्रणाली हो कि २० मिनेटमा स्थापना गर्दछ, यो प्रयोग गर्न सजिलो छ किनकि यो केवल बाक्लो एल्युमिनियम सिलिन्डर हो जुन समान ठाउँमा स्थापना हुन्छ जहाँ तपाईंको बाह्य लक थियो, त्यहाँ भित्र प्रणाली छ। ब्लुटुथ, ब्याट्री र मोटर लक सक्रिय गर्न पर्याप्त बलियो। यसलाई भित्र राख्न जब तपाईं भित्र हुनुहुन्छ र तपाईं विचलित हुन चाहनुहुन्न तपाईले सामान्य सिंडी जस्तो सिलिन्डर खोल्नु पर्छ।
यो एक साथ छ नि: शुल्क अनुप्रयोग आईफोन र एन्ड्रोइडका लागि जुन तपाईंलाई निर्धारित गर्न अनुमति दिन्छ सुरक्षा अनुमति। अनुप्रयोगको साथ, यो फोन छुनु बिना स्वत: अनलक गर्न सेट गर्न सकिन्छ; अन्य वैकल्पिक कन्फिगरेसनले अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ जान्नुहोस् जब तपाईं नजिक आउनुहुन्छ बाहिरबाट ढोकामा र अनलक गर्नुहोस्।
मूल्य हो 249,99 डलर र तपाईं यसलाई खरीद गर्न सक्नुहुनेछ कर्पोरेट वेबसाइट.
केभो सम्पूर्ण लक बदल्नुहोस्, जसले अनुकूलता मुद्दाहरूलाई हटाउँछ। तपाईंलाई Kwikset डेडबोल्ट चाहिन्छ र मोटर, ब्याट्री, ब्लुटुथ रेडियो र सम्पर्क सेन्सरको साथ, पूर्ण प्याक पहिले नै त्यहाँ छ। यसले स्थापनाको लागि केहि बढी समय लिन्छ, तर परिणामहरू धेरै राम्रो हुन्छन्।
थप हार्डवेयरले लक गर्न वा अनलक गर्न अनुमति दिन्छ, तपाईंले केवल बोल्टलाई छुनु पर्छ तपाईंको औंलाको साथ जब एक अधिकृत फोन (वा कुञ्जी फोब) नजिक छ। तपाईंले आफ्नो फोन जेबबाट कहिल्यै निकाल्नु हुँदैन वा अनुप्रयोग सुरु गर्नु हुँदैन। यसको मतलब यो होइन कि यो अवस्थित छैन, कि यो गर्दछ, तर यो प्रयोगको लागि प्रयोग गरिन्छ प्राधिकरण अस्थायी कुञ्जीहरूमा।
मूल्य हो 219,95 २ XNUMX डलर र तपाईं यसलाई खरीद गर्न सक्नुहुन्छ यी वितरकहरू मध्ये कुनै पनि।
यदि तपाईको फोनको ब्याट्री मर्दछ भने के हुन्छ?
La भौतिक कुञ्जी अझै पनी काम गर्दछ, ताकि तपाईं केहि हातमा राख्न सक्नुहुन्छ। केभोले एक वायरलेस रिमोट कन्ट्रोल fob समावेश गर्दछ। अगस्टले अन्य ब्लुटुथ उपकरणहरूसँग काम गर्ने योजना बनायो र यसरी निकटताबाट अनलक गर्न जारी राख्नुहोस्।
यदि लकि if प्रणालीमा ब्याट्री सकियो भने के हुन्छ?
दुबै अगस्त र केभो चार एए ब्याट्रीहरूसँग आउँदछ जुन एक बर्षसम्म रहनेछ। सम्बन्धित अनुप्रयोगहरू हुनेछ चेतावनी दिनेछ जब उनीहरू कम छन्। यदि यो अझै विफल हुन्छ भने, भौतिक कुञ्जी जहिले पनि रहन्छ।
के हुन्छ यदि तपाईंले आफ्नो फोन हराउनुभयो भने?
तपाईं सक्नुहुन्छ अर्को कम्प्युटरबाट पहुँच र हराएको फोन खोल्ने क्षमता हटाउनको लागि तपाईंको खातामा लग इन गर्नुहोस्।
यदि लक मोटर असफल भयो भने के हुन्छ?
केभोमा मोटर कम्तिमा टिकाउन निर्माण गरिएको छ Thousand० हजार प्रयोग गर्दछ र अगस्ट भन्छन कि उसको लकले हराउन सक्छ Uses० प्रयोगहरू। पुरानो कुञ्जीले डेड ईन्जिनलाई ओभरराइड गर्न सक्दछ।
ह्याकर आक्रमणबाट के हुन सक्छ?
केहि छैन, दुबै प्रणालीहरू एक फोन मार्फत इन्टरनेटमा जडान हुन्छ, त्यसैले ह्याकि to प्रति संवेदनशील छैन। यसको प्रयोग ब्लुटुथमा आधारित छ, यसलाई हाल सुरक्षित उपलब्ध प्रणाली बनाउँदै।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » आईफोन सहायक उपकरणहरू » गृह स्वचालन, तपाईंको आईफोनको साथ घरको ढोका खोल्नुहोस्
तिनीहरू धेरै राम्रो छन् तर अमेरिकी लकहरूको साथ मात्र कार्यशील छन्। आशा छ एक दिन उनीहरूले यूरोपमा रहेका मोडेलहरूको सेवा गर्नेछन्।
यस अवस्थामा तिनीहरू युरोपेली लकहरू हुन्। ती विशिष्ट अमेरिकीहरुका लागि उपयुक्त छैनन्। भ्रमण गर्नुहोस्, यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने, वेबमा। अभिवादन
केहि सेकेन्डमा ...
लक मात्र यो छोएर मात्र सक्रिय हुन्छ यदि अधिकृत टेलिफोन नजिक छ, कुन दूरीमा? यो यो हो कि जबसम्म तपाईं आफ्नो टेलिफोनबाट ढोकाबाट टाढा हट्नुहुन्न कोही कोही आउन र खोल्न सक्दछन्।
MPS लाई जवाफ दिनुहोस्
आईफोन hardware हार्डवेयरको साथ वालपेपर डाउनलोड गर्नुहोस्
नयाँ आईप्याड एयर २ सँग मिल्दो केसहरूको सूची